Iveki emnyama yeGijon ye-2018 inababhali abali-100 bohlobo lweNegro | Uncwadi lwangoku
Iveki emnyama yeGijon 2018
IGijon, indawo ekhethekileyo yeVeki eNtsundu, ngomnye weminyhadala eyaziwayo eYurophu.
HoyUkuhamba koololiwe abaMnyama kwisikhululo saseChamartín nge-11.48: XNUMX kusasa, Iveki eNtsundu yeGijon iqala. Iya kuba yi inombolo yohlelo engamashumi amathathu ananye Yentlanganiso yeklasikhi yababhali beenoveli ezimnyama. Ukuhamba njengesiqhelo ngumculo omninzi kunye neenkomfa ngezihloko ezahlukeneyo, ababhali abalikhulu baya kwabelana ngolonwabo kunye nokufunda noluntu phakathi Nge-6 ne-15 kaJulayi.
Abanakuphoswa lAbabhali abadumileyo bohlobo olumnyama kuCastilian NjengoBerna González Harbour, Blue Jeans, Alicia Giménez-Bartlett, Jorge Eduardo Benavides, Lorenzo Silva, Juan Madrid okanye Marta Robles. Kukwakho negumbi lezithembiso ezitsha zohlobo, ezingaziwa kancinci, okwangoku, eziyinxalenye yoluhlu lwethu lweentandokazi, ezinje ngoRosa Valle, Ana Ballabriga okanye uDavid Zaplana; bonke baya kuba yinxalenye yendawo yeVeki eNtsundu enikezelwe kuyo Ipapashwe nguwe.
3 Indlela eyiyo:
Olu hlelo lweVeki eNtsundu yaseGijon luya kuba nemixholo yeenkwenkwezi: umdla, inoveli yolwaphulo-mthetho yaseBasque, uphando lobuntatheli ngokuchasene nophando lwamapolisa kunye nokuhlekisa kwababhali ababhinqileyo.
Umsitho, njengamaxesha onke, uya kuba ngumboniso ngokwawo: iikonsathi umculo waseSpain, kolu hlelo kunye nekhonsathi yomrhumo kwi-Asturian Tino Casa, umboniso wencwadi, iimarike, iithambeka kunye nomtsalane webala ukuzisa inoveli yolwaphulo-mthetho kwiindwendwe ezingaphezu kwesigidi ezilindelweyo kwisixeko saseAsturian.
Iveki ethatha iintsuku ezilishumi kwaye ukusukela kwintlanganiso yabambalwa ibe yenye yeminyhadala ephambili yaseYurophu, kukuqeshwa okungafanele kuphoswe kwaye, kuba silapho, ukonwabela imihlaba, iilwandle, i-gastronomy, I-Asturian cider kunye novelwano lwabantu belizwe, oko kukuthi, ngendalo, iparadesi.
Intsomi yolwaphulo-mthetho, indalo ngendlela yayo esulungekileyo, umboniso kunye nokutya okumnandi, yintoni enye onokuyicela? Yonwabele, iiveki!
Ngolwazi oluthe kratya apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Iveki emnyama yeGijon 2018
UJohn Malkovich njengoPoirot. Kwaye nobunye ubuso obuvela kuMcuphi uAgatha Christie.
Unokwenza ntoni ukuba ubunokuhlala iinyanga ezimbini? Udliwanondlebe noSantiago Díaz, umbhali weTalión